3- Ahoana no atao tsy ampivadika ny ronono (tola)
Raha ronono amin'ny boite UHT, dia tsy maintsy anaty vata fampangatsiahana 4°C, tsy mihoatra ny 4-5 andro.
Raha ronono velona, dia ampangotrao, hanimbana ilay ferments, dia ataovy amin'ny toerana mangatsiatsiaka tsy azon'ny vovoka na masoandro, tsy azo tehirizina mihoatra ny 2 andro kosa, na atao anaty vata fampangatsiahana.
4- Mbola azo ampiasaiana ve ny ronono nivadika na tola
Azo anaovana fromage izy.
Ario ilay ranony mavomavo iny, petit lait, tsifo tsara amin'ny passoire na lamba manify.
Mangalaha fouet, dia kapohy mba ahalasa azy malefaka.
Asio crème fraîche raha tianao, asio sira na siramamy izay itiavanao azy.
5- Ahoana ny fanamboarana yaourt
Mangalaha ronono 1l, mety na ronono velona na UHT en boite, na vovondronono, hafanao moramora izy, feu doux, avela angotraka miadana mandram-paharitran'ny 1/3 (maharitra 20min eo zay), arakaraky ny maharitra azy no mahamafy ilay yaourt.
Sarony lamba izy, dia avelao angatsiatsiaka, zakan'ny tanana (40-50°C raha manana theromètre de cuisine), asio yaourt iray hafa nature novidianao, na ferment raha mahita eny amin'ny pharmacie na mpivarotra, kapohy tsara amin'ny fouet hifangaro tsara.
Ampandalovy passoire manify raha nisy nivaingambaingana (Tsy voatery koa anefa raha tiana)
Raha vanille na canelle na gousse, dia vao manomboka mikarakara dia efa arotsao hiditra tsara ny fofony.
Raha huile essentiel, dia amin'ny farany vao asiana mba tsy ho may lasa caramel, toy izay koa ny siramamy, amin'ny farany vao asiana siramamy izay tiana, mba tsy ho may.
Raha confiture, dia izy efa mivaingana vao asiana confiture ambanin'ny pot lehibe hafa dia araraka izy, na eo ambony pot efa vita no asiana confiture.
Ataovy anaty pot kely verre no tsara, na plastique raha tsy misy, saronana ilay pot, na film alu, dia alaharo anaty vilany, dia fonoso bodofotsy hafana, milona indray alina.
Azonao alahatra anaty vilany lehibe koa ireo pot ireo, dia asio rano, hatreo amin'ny haavon'ilay ronono anaty pot, ivelan'ny pot (bain marie), dia ampidiro anaty la four 45-55°C mandrira ny 15-20min. Avy eo, vonoy ny la four, aza sokafana fa ajanony anaty hafanana ao mandritra ny 5-6h. Amin'ny tany mafana, aleo daninin'ny andro eo ivelany eo izy. Arakaraky ny hipetrahany anaty hafana no maha mafy azy.
Raha tsy manana four na tsy misy reglage 45°, dia ataovy anaty cocotte minute ny ronono mandritra ny 25min, sokafo ny cocotte, avelao hangatsiatsiaka 50° zakan'ny tanana, sarony lamba izy, asio parfum sy ferment na ilay yourt nature novidiana ary siramamy izay tiana. Ataovy anaty pot misarona, na film alu, dia avereno anatin'ilay cocotte mafana, tsy asiana rano, tsy atao ambony afo, fa avela hafana ao mandritra ny 5ora.
Rehefa mivaingana tsara izy dia ataovy anaty vata fampangatsiahana. Ny iray amin'io indray azonao anamboarana yaourt maromaro hafa.